Ingchọta Visio ... aka ... Ndị mmadụ na-eche ihe kpatara m ji nọrọ na Mac | Martech Zone
Fraịde, Machị 28, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndị mmadụ na-eche ihe kpatara na anaghị m eji Microsoft arụ ọrụ dị ka m jiri n'oge gara aga. Fọdụ ndị na-eche ihe PC / Mac dum bụ naanị egwuregwu. Echere m na PC na Mac ihe bu kwa ihe egwuriegwu. Ọ bụ ọ bụghị. Anọla m na Mac ugbu a maka otu afọ.
Ihe kacha njọ maka ịrụ ọrụ na Mac bụ ịrụ ọrụ na PC. Ana m eme ya kwa ụbọchị na ọrụ. M bugara Vista na nso nso a (ọ ka na-acha anụnụ anụnụ mgbe ụra gachara) ma chọọ ibudata ma wụnye Microsoft Visio Standard Edition. Mfe, nri? Azụrụ m ya na Microsoft n'ịntanetị ka m gaa gaa budata ya ọzọ, wee wụnye ya ọzọ.
Ana m aga ebe ezi uche dị, Microsoft Download Center. Enwere ụlọ ọrụ Silverlight nke Microsoft Download Center ka m wee nwee ya! Naanị m na-ede "Visio" n'ọhịa "ọchụchọ ọchụchọ". Nke a bụ ihe butere ụzọ na nsonaazụ 119:
Kedu nsonaazụ nke mbụ? Ọ bụghị Visio ma ọlị… ọ bụ 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Chekwaa dị ka PDF ma ọ bụ XPS. Huh? (Agaghị m anwa ịchọta ihe kpatara nsonaazụ mbụ bụ ọkwa # 31). Yabụ, m gụrụ ma dozie ma gụọ ma dozie ma gbasaa iji gosi nsonaazụ 100… Enweghị m ike ịchọta Visio ebe ọ bụla… naanị ụfọdụ ndị na-ekiri ya na ụyọkọ ihe nzuzu ndị ọzọ.
Gaa na saịtị Office! Ebe ọ bụ na azụrụ m Visio n'ịntanetị, echere m na m ga-alaghachi n'ụlọ ahịa ahụ na Microsoft. M fumum gburugburu ntakịrị, mana achọtara m ya… Visio Standard Edition. Na n'aka ekpe sidebar… Gara aga ịzụrụ! Yahoo !!!!… er… M na-ekwu Wahooo !!! M pịa gara aga andzụ na nọmba ọnụahịa m na-apụta. Ee !!!! Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ !!!! M pịa ịzụta na nke a bụ ihe m nwetara:
Ouch. Ana m eji Internet Explorer 7 even… not even risking this one na Firefox. Ana m ekpocha kuki m. M na-agagharị azụ, pịa akwụkwọ ọnụahịa m… na….
Na-amị Microsoft! Na-apụ na weebụ… ị ​​inu! Ugbu a, enweghị m ike ịnweta ọrụ m taa na ngwanrọ ahụ enwere m nkụda mmụọ n'ihi na ị mere m nkwalite nke na-efu m $ 150 ọzọ na enweghị m ike ibudata ma enweghị ike iji.
Ndị mmadụ na-eche ihe kpatara m ji nọrọ na Mac.
Ka a sịkwa ihe mere Microsoft Brand ji daa. Ọ ga-eju m anya ịmata ma ndị ọrụ Microsoft ọ bụla ga-eji ngwaahịa nke aka ha, n'ịntanetị ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị.
Ee, m na-arịa ọrịa nke M $. N’oge na-adịbeghị anya, m banyere ụgbọ mmiri na Outlook 07 wee gaa Mozillas Thunderbird .. Obi tọrọ m ụtọ. Ọzọkwa ịga tinye ụlọ ọrụ na-emeghe n'oge na-adịghị anya iji kpochapụ ihe mkpofu ụlọ ọrụ M $ ndị ọzọ.
Na-eche n'ezie ịme mmụba ahụ na iji ihe ọ bụla mana Linux na igwe m ugbu a. Ọ ghọọla ezigbo enyi na enyi dịka oge ngwanrọ na ọtụtụ winblows sọftụwia nwere linux dakọtara ndị ọzọ ụbọchị nke a.
Amaghị m Ọ bụrụ na m nwere obi ike iji nweta mac tho.
Kedu nke nro !!! Microsh * te! Mgbe anyi ndi mmadu muta…. Microsoft ga-anọ na nsogbu REAL mgbe obodo ụlọ ọrụ na-achọpụta na mberede na ha ga-echekwa oge na ego mgbe ha gbanwere Mac ma kwụsị iji ngwaahịa Microsoft.
Ma, ka m na-agụ ala, njikọ Mgbasa ozi Google gị na ala nke ntinye gị nwere njikọ ịzụta Office 2003 na 2007.
Na Mac mgbasa ozi dị n'akụkụ, ejiri ya na Office ọzọ tinye ins.
Oge ụfọdụ ọ na-atọ ụtọ etu koodu mgbasa ozi akpaghị aka nwere ike iputa n'oge kachasị mma. Gị post jikọtara na “adọ” mgbasa ozi mere m mgbede 🙂
Ha! Nke ahụ na-adịkarị ka ọ̀ bụ eziokwu, Bob! Mgbe obula m gbara mmadu, mgbasa ozi ha na-abanye na saịtị. Na-akpa ọchị.
Mepee Office dị ebe a 2.4 na 3.0 ga-aghọ ọbụna otu nzọ ụkwụ ka mma. Enwekwara ndọtị nke mere na mmadụ nwere ike iji LaTeX n'ime ya n'oge a…
Naanị jiri OmniGraffle Pro. Visio bụ bloat-tastic agbanyeghị.
Enwere m ezigbo ihu ọma na OmniGraffle Pro, Jason. Ọ dị m ka ya bụrụ na ọ dabara na Visio (ma ọ bụ nke ọzọ), mana! Enwerem ndị ahịa jiri Visio.
Know maara na Mac agaghị adị njọ ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ndị Mac niile. ” 😉
Ha! Ikwuru eziokwu, Mike. Anyị bụ ụyọkọ - karịsịa ndị folks dị ka m nke miri emi na teknụzụ MS maka afọ iri abụọ gara aga!
Enwere m nsogbu ole na ole na ngwaahịa Microsoft. Oh, enwere m ọtụtụ nsogbu na ntanetị, mana ọ nweghị ihe dị oke egwu. N'ihi enweghị ntụkwasị obi zuru ezu nke ịntanetị, ọ masịrị m ịnwe mbipụta ike nke mmemme niile m zụtara, ọkachasị mgbe ha dị oke ọnụ. Lọ akwụkwọ ochie, ama m.
Ọ bụ ihe iju anya, mana enwere m nsogbu karịa Macs na Linux karịa Windows, mmemme mmemme mepere emepe adịghị ka ọ na-arụ ọrụ m. N'ezie, ọ bụghị n'ihi enweghị nkà na ụzụ (ana m eji kọmputa kemgbe ụbọchị DOS).
Ọzọkwa, gịnị kpatara ndị mmadụ ji dochie mkpụrụedemede mgbe ha na-ede “Microsoft”? Echere m na, ọ bụghị dị ka a ga-asị na ịkọwapụta ya n'ụzọ ụfọdụ, ọ ga - eme ka Bill Gates nwee ike adịghị ike ịchị ụwa. Ọ dị ka nzuzu.
Edemede a bụ nnukwu nnukwu oghere na m na-ewute m na saịtị ha. Echere m na njikọ ahụ bụ na Microsoft na Microsoft anaghị arụ ọrụ nke ọma na ndị ọrụ ha. Okwu m abụghị maka sọftụwia ahụ (oge a;), ọ bụ n'ezie maka ọrụ ndị ahịa.
N'ihi na dị ka m na-echeta, ọ bụ mgbe niile otú ahụ. Microsoft abụtụbeghị nke a na-apụghị ịbịakwute ma kwupụta ntuziaka… ihe dịka ịnwe ihe nchọgharị na-etinyeghị ụkpụrụ, iwulite ụdị nchekwa nke na-arụ ọrụ na ngwa Microsoft, na ileghara ụkpụrụ ndị ọzọ anya - dịka ụkpụrụ akwụkwọ.
Enwere m nkwanye ùgwù dị ukwuu maka ihe ha rụzuru, mana ekwenyere m na iro ha maka onye ọ bụla ọzọ nọ na mbara igwe na-enweta ihe kachasị mma n'ime ha. Otu anya lee vidio Steve Ballmer na - akọwara m ya!
Ekwela ka m mehie, Ọrụ nwekwara ya quirks, kwa. Ọ bụ jackass ma ọ bụrụ na ị gụọ akwụkwọ akụkọ ọhụụ kacha ọhụrụ. Mana echere m na uche ya dị mma karịa ịgbanwe ọnọdụ ọ dị na ịgbalị ime ka ihe dị mfe na nkecha maka 'òtù nzuzo' ya.
Naanị ihe edeturu, Microsoft sooro email banyere nbudata m taa, 4/14/2008 nwere njikọ maka nbudata na igodo ngwaahịa iji wụnye.